Ukuba Umshayeli Uber Dubai - Careem kanye RTA Guide for Work 👳
Ukuba Umshayeli Uber Dubai
Ukuba Umshayeli we-Uber phakathi Dubai. Ukuze ube umshayeli we-Uber eDubai. Abafuna uJobe kumele ube nerekhodi lokushayela elihlanzekile. Ngakolunye uhlangothi, uqashwe yinkampani ye-limousine noma insiza yemoto ku Dubai. Futhi uhlangabezane nemfuneko yobudala ephansi ye-21. Abashayeli abangahle baphinde babuke ividiyo emfushane yokuqeqesha. Imibhalo edingekayo ilayisense elivumelekile lokushayela eDubai le-United Arab Emirates kanye ne-Emirates ID noma ubufakazi bokuthi uhlala khona. Lokhu kuvumela umshayeli ukuthi athole imali ngendlela evumelana nabo.
Ungaqala kanjani no-Uber e Dubai?
Umhlahlandlela Osheshayo Wokuqalisa nge-Uber?
Isinyathelo No.1 - Bhalisa ku-inthanethi nge-Uber
Ukuqala nje udinga ikheli le-imeyili kanye ne umakhala ekhukhwini!. Kuhle, manje tshela inkampani yakwa-Uber kancane ngawe nangolwazi lwakho lokushayela, futhi inkampani izokuqalisa.
🚕 Bhalisa manje
Isinyathelo No.2 -Khona Layisha i-ID yakho nolunye ulwazi
Njengoba usola ukuthi kunamaphepha athile okudingeka uwalandele ukuze uqhubeke. Kunemibhalo embalwa inkampani ye-uber okudingeka ibone ngaphambi kokuthi isicelo sakho sibuyekezwe.
Uma ungumshayeli eDubai noma ku-Abu Dhabi ku I-United Arab Emirates:
Ikhadi le-RTA elivumelekile
Kufanele ube ne-ID e-Emirates evumelekile
Imoto eqinisekisiwe ye-RTA Mulkia
Kufanele ube nesithombe sephrofayela yokushayela bese uyithumela inkampani yase-Uber.
Kumelwe kube isithombe esibheke phambili, esiphezulu esifaka ubuso obugcwele bomshayeli nesiphezulu samahlombe, ngaphandle kwama-izibuko
Kumele kube isithombe kuphela somshayeli ongekho enye indaba ehlathini, ekhanyisiwe kahle, futhi ekugxilweni. Ngeke ube isithombe selayisensi yokushayela noma esinye isithombe esinyathelisiwe.
Isinyathelo No.3 - Thola injini ephansi / uphethiloli futhi ulungele ukuhamba imoto!
Iyiphi imoto elungele wena? Ngokuqinisekile imoto encane eshibhile. Ngaphezu kwalokho, Qiniseka ukuthi iyahlangabezana nezidingo ze-Uber futhi izindinganiso ezisebenza e-United Arab Emirates.
Yiba smart smart futhi njalo khumbula !. Ukuthi uzokwenza i-dirham eyengeziwe uma uqhubeka nokusebenzisa imali yakho izimoto ukugcina ngentengo ephansi.
Kodwa-ke, yebo, ungasayina ngisho noma ungenayo imoto efanelekayo okwamanje. Hlola wethu Izixazululo zezimoto ze-Uber.
🚕 IZICELO ZEMVELO
Isinyathelo No.4 - Cupha i-akhawunti yakho bese wenza imali ye-Uber!
Manje, uma ukwazile ukulandela umhlahlandlela wethu eDubai futhi uqeda zonke izinyathelo ezingenhla. Kufanele ukwazi ukuthola umsebenzi e-Uber eDubai. Maduze nje i-Uber isebenze i-akhawunti yakho nakanjani uzoqala ukwenza i-dirham.
Indlela yokuba ngumshayeli we-Uber e-Dubai
Kuningi imisebenzi emirates e Dubai. Ukuze ukwazi ukuguquguquka nokuzimela, uber kungenzeka ukuthi uyona ongcono kakhulu. Ukuze uthole imisebenzi ye-Uber e-Dubai, vakashela iwebhusayithi ye-Uber. Ukubhalisa kulula njengokuqedela ukubhalisa ku-intanethi. Ukuba umshayeli we-Uber e-Dubai amanye amacala athatha isikhathi. Ngakolunye uhlangothi, kunamahora amaningana lapho uzokwenza khona imali engaphansi kwesilinganiso esincane.
Kepha akudingeki ube namalayisense okushayela amatekisi futhi ungahlala ushayela enye inkampani efana neKareem taxi esifundeni seGulf. Ngakho-ke, inqobo nje uma uqala ukuba nesipiliyoni esithile uzobona ukuthi ungayenza kanjani imali enhle.
Uber usebenza kanjani e Dubai?
Ungafisa ukwazi ukuthi uyisebenzisa kanjani i-Uber eDubai. Ngokufanayo emhlabeni wonke, ukusebenzisa i-Uber, umane ulande uhlelo lokusebenza, sesha imali yakho, futhi ukhethe uhlobo lokugibela i-Uber eDubai ongathanda. Ukukhokha kwenziwa ngohlelo lokusebenza bese kudluliswa ngokushesha. Kunamazinga amathathu ahlukile we-Uber eDubai - Ukukhetha komsebenzisi kuyinto insiza ye-premium futhi inikezela izimoto zikanokusho ngenani eliphakeme; I-Uber emnyama okuyinkonzo yasekuqaleni yakwa-Uber; I-UberXL engeyamaqembu amakhulu noma imfuneko yesidingo semoto enkulu. Lokhu kusho ukuthi i-Uber Dubai inikeza uhla kusuka ejwayelekile ukuhamba kwe-premium.
I-Uber itholakala amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezingu-7 ngesonto. Ukusebenzisa uhlelo lokusebenza, abagibeli bakwazi ukucela i-Uber nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma ebusuku. Uhlelo lokusebenza luzobonisa umgibeli isithombe somshayeli wabo kanye nemininingwane yemoto, ukuqinisekisa ukuphepha kokubili amaqembu ngezikhathi zonke. Kukhona nekhono lokulandelela umshayeli ngesikhathi sangempela ukubona ukuthi bazofika nini.
Izindleko ezilinganiselwe itekisi e-Dubai zizungeze i-44 AED (i-Dirham e-Emirates yase-Arab) yama-10 wamamayela. Nge-Uber, lokhu kuyiseduze ne-28 AED ebangeni elifanayo. Umholo we-Uber wesilinganiso e-Dubai uwuzungeze i-30-50 AED ngehora.
Ungakhetha kanjani Uber, umshayeli?
Uhlelo lokusebenza lwefoni le-Uber lithumela isicelo sakho sokuhambisa abashayeli endaweni yasendaweni. Omunye walaba bashayeli uyabe esamukela Umsebenzi futhi ukuqoqa lapho uya khona. Ngenxa yalolu hlelo, i-Uber ayikwazi ukukuqhathanisa nabashayeli abathile. Ngemuva kohambo lwakho, kunenketho yokukala umshayeli wakho ngokunikeza impendulo engaziwa. Uber angabe esebenzisa lolu lwazi ukuqinisekisa ukuthi insizakalo yabo ihlala isezingeni elilindelekile. Ukuba umshayeli we-Uber e-Dubai kuyakufanele.
Uber inezinsizakalo eziningana. Esinye sezibonelo ngu-Uber XL. Lokhu kuyinkonzo ehlukile e-Uber inkampani. I-Uber XL iyinsizakalo yezimoto engabizi okukuvumela ukuthi uqhube izimoto ze-SUV nezimoto ezinkulu kunezingqinamba.
Kuyini i-UberXL? Kuyinto elula eyenziwe inkampani enkulu yomzalwane e-uber. Ngakho-ke uma usebenza naloyo nkampani uzoba neqembu labantu emotweni eyodwa okuqinisekile. I-UberXL imane nje iyindlela ehamba phambili yokuhamba yezinsizakalo ongayinikezela kumakhasimende we-uber.
Ungabasiza nakanjani abantu ngaphandle kokushisa imali ephaketheni lomgodi, i-UberXL iyisevisi yemoto ongayinikeza futhi. Ngenkathi usebenza e-Uber XL Uzoba ngabathengi abangamakamelo e-SUV noma e-minivan. Iningi lalezo zimoto lilingana okungenani nabantu be-6-8 ngakho-ke kunjalo ulungele iphathi noma umhlangano womndeni.
Kanjani ukuba umshayeli we-Uber?
Kusukela yethulwa ngo-Agasti 2013, u-Uber ku I-United Arab Emirates isuka emandleni iye emandleni. Ngenkathi imininingwane etholakala ngokukhululekile ku-inthanethi iphakamisa ukuthi u-Uber kudingeka ukuthi akhokhise i-30% ngaphezulu kwamatekisi ajwayelekile, eminye imininingwane etholakala ku-inthanethi iphakamisa ukuthi imali engqo ekhokhiswa yi-Uber iyahambisana kwenye indawo emhlabeni, futhi ishibhile kunamatekisi 'ajwayelekile' okuthile Uber base ibhizinisi modeli on, futhi uyaziqhenya ngayo.
Ngenxa yomthethonqubo othi abashayeli be-Uber kumele basebenzele inkampani ye-limousine, abashayeli kufanele babelane ngemali abayikhokhela nomqashi wabo kanye no-Uber, okusho ukuthi kungenzeka bangenzi okuningi njengoba bebengakwazi ukuba lokhu kungabi indawo. Lokhu kusho nokuthi abashayeli be-Uber ngokuvamile inkontileka yokusebenza njenge-Indian exats, bese ushintsha ku-Uber ngesikhathi sokuhamba kancane. Yiqiniso, lokhu kusho ukuthi u-Uber akuyona kuphela imali engenayo engayilindela, okwenza kube ngcono kakhulu kubashayeli jikelele.
Ngokungafani nezinsizakalo zetekisi zendabuko, abashayeli be-Uber akudingeki bakhokhe intengo eqashisayo ku-Uber ukuze usebenze, futhi alindeleke ukuthi basebenze amahora amisiwe. Nge-Uber, abashayeli bahlela amashejuli abo futhi, ngakho-ke, bangasebenzisa okuningi noma okuncani njengoba bathanda.
Qala Ukushayela Nge-Uber
Faka isicelo lapha: https://www.uber.com/drive/requirements/
Ungashayela kanjani u-Uber e-United Arab Emirates ?. Inkampani ye-Uber inendlela elula kakhulu yokuqala ngezinsizakalo zabo ezimangalisayo. Vele uhlabelele kuwebhusayithi yabo futhi ungaba khona !.
I-Uber eDubai iyindlela enhle ukuba umphathi wakho futhi wenze imali emakethe enzima kakhulu njenge-UAE. Hhayi nje ukuthi uzojabula kepha iningi labantu likufanele ukushayela nge-Uber. Futhi bavele benza imali nge-uber eDubai. Ngokwesibonelo, AmaNdiya nasePakistan asevele enza imali ngokusebenzela uber eDubai.
Empeleni, udinga ukwazi okuningi uma ushayela eDubai noma e-Abu Dhabi nge-Uber. Futhi la madolobha ayizindawo ezinhle ngoba cishe kukhona i24h amathuba okwenza imali.
Ezinye izinkampani ezifana no-Uber kufanele uzame ukuthola umsebenzi
Umnakekeli uCaptain (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://drive.careem.com/
UCareem Captain kungenye inkampani efanele ukubukwa, ungasebenza ncamashi njengomshayeli we-Uber onokaputeni weCareem.
I-1. Bhalisa kuwebhusayithi: Bese ugcwalisa ifomu phezulu kwewebhusayithi kulula kakhulu futhi ufake isicelo sokuba ngumphathi wezinakekeli.
I-2. Uma uthola ucingo oluvela eqenjini labo, kufanele ube nokuqeqeshwa okuyisisekelo. Ngemuva kokubukeza inkampani yakho yenkampani yesiphathimandla se-application ikucela ukuthi uthole iseshini yokuqeqesha.
I-3. Gibela futhi wenze imali eDubai. Lapho ukuqeqeshwa kuqedile, ungaqala ukuthola imali!.
Qalisa ngeNakekeli iKhansela namhlanje!
Inkampani yeTalixo (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://talixo.com/careers/
Incwadi yenkampani yeTalixo manje itekisi lakho eDubai. Lokhu kushiwo yiwebhusayithi yabo futhi kuyisitatimende sangempela. Nge-Talixo ungakhetha ukushayela itekisi, iklasi lomnotho kanye amathuba emisebenzi ekilasini.
Iphuzu elihle lale nkampani ukuthi inhlangano iTalixo itholakala emadolobheni ase949 emhlabeni jikelele. Futhi lokho ukukunikeza isiqalo esikhulu kakhulu sokugcina emsebenzini wakho njengomshayeli wetekisi. Sisho ukuthini ngalokho? Kukhona isiqinisekiso esikhulu sokuthi uzothola imali yakho ngesikhathi futhi ngaphakathi kwezindaba ezisebenzayo.
I-RTA Taxi (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://www.rta.ae/links/special_needs/en/taxi.html
Yebo, ukuze uthole umsebenzi nge-RTA Taxi kuzodingeka usebenze kanzima kancane. Itekisi le-RTA yinkampani ehlobene nohulumeni. Ngakho-ke, ukusebenza lapho kuhle impela futhi yonke into kufanele ilungele iholo bese wonga imisebenzi izonikezwa.
Kepha ngakolunye uhlangothi, ukuthola umsebenzi ngetekisi le-RTA nakanjani kuzoba umsebenzi onzima ukufeza. Kepha njengoba izinkombandlela ze-expat - Dubai City Inkampani iqembu njalo khuthaza abathengisayo ukuthi bafonele izinkampani futhi ubabuze imininingwane eminingi.
I-Taxi Corporation (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://www.dubaitaxi.ae/en/Careers
Imisebenzi ephezulu yesikole inikela nezinsizakalo ezingcono kakhulu zamatekisi e-United Arab Emirates. Ngokuvamile, ukuba yi-Uber Driver eDubai akuyona into efanayo neDubai Taxi. Ngale nkampani, uzoba nomsebenzi wesikhathi esigcwele futhi ezimweni eziningi imoto emangalisayo ukushayela. I-Dubai Taxi Corporation enikezela izimoto ezinjengeTesla neMercedes emikhunjini yazo. Ngakho-ke, elinye lamaphuzu okufanele uyazi: le nkampani iyinja ephezulu kumdlalo wangasese ojikelezayo amasevisi.
Uma unesipiliyoni ngokushayela nokushayela itekisi. Kufanele ubanikeze ucingo noma ubheke imininingwane ebuyekeziwe kumawebhusayithi abo. Kuze kube manje siyakwazi lokho inkampani ikhokha imali enhle kakhulu yezisebenzi ezi-expats.
I-One Road Taxi LLC
Faka isicelo lapha: http://www.oneroadtaxi.com/career.htm
Umgwaqo Omunye Wendlela Uqasha e-United Arab Emirates. Ngakho-ke, uma ufuna ukuba yingxenye yenhlangano yethu ekhulayo. Kufanele nakanjani ukhulume nalesi siqine. Ukuphathwa kwetekisi elilodwa lomgwaqo kubhekile ukuqasha abaphathi abasha.
The Inkampani ihlala ifuna abokufika abavela kwamanye amazwe. Ngakho-ke, amalungu ebhizinisi awo wonke amazwe angasebenza njengomshayeli wetekisi ebhizinisini labo. Kodwa-ke, uma ungumuntu onentshisekelo nokwethembeka ngokusiza abantu ukufinyelela lapho befika khona ngesikhathi. Sicela ubheke itekisi lomgwaqo elilodwa izikhala ezikhona njengamanje eDubai City.
I-Trans Trans Mekhulile (Dubai)
Faka isicelo lapha: http://www.safetransme.com/index.html
Ibekwe kahle futhi super google orientated inkampani. Abantu abaningi basebenzisa le nhlangano. Le nkampani ibheke phambili ekwenzeni ibhizinisi. Noma kunjalo, ayikho indlela yokuthola noma iyiphi isigaba somsebenzi kwiwebhusayithi yabo. Kepha, ikakhulukazi, kufanele ngibanikeze ucingo ukubuza nje ukuthi ngabe banazo ezinye izikhala zomsebenzi njengomshayeli wetekisi.
Faka isicelo lapha: http://www.citytaxi.ae
ITaxi Taxi yinkampani endala impela. Silula ngoba iCity Taxi AE yasungulwa ngonyaka we-1983. Iminyaka yokusebenza, inkampani ibekhethekile kumasevisi athile afana ne ukuthutha abantu kusuka kunoma iyiphi indawo eya eDubai nase-Abu Dhabi futhi nakwamanye amazwe. Le nkampani isebenzisa imoto encane yokuhamba.
Iphuzu elihle kakhulu ngale nkampani ukuthi bayaqasha. Ungavakashela iwebhusayithi yabo futhi zisebenza ngqo ne-CV yakho kuwebhusayithi. Vele uvakashele inkampani yabo noma ubanikeze ucingo uqobo. Abaphathi beDolobha Taxi bazojabula ukukusiza ekutholeni umsebenzi njengomshayeli wetekisi eDubai.
I-Arabia Taxi (Dubai)
Faka isicelo lapha: http://www.arabiataxi.ae/Dubai/en/career.html
I-Arabia Taxi ayisihluphi ngalutho nokuba yi-Uber Driver eDubai noma e-Abu Dhabi kodwa sibeke le nkampani ohlwini lwethu. Ngoba sikholwa nje kuzokusiza finyelela izinhloso zakho zokuthola umsebenzi ezimakethe zomsebenzi ezinzima kakhulu e-UAE.
Le nkampani yinhlangano ekhulayo ku- UAE. Okwamanje yiyona kuphela inkampani ekwazi ukuthola ukuhambisana okugcwele kweziphathimandla zezokuhamba emigwaqweni e-United Arab Emirates. I-Arabia Taxi iyinkampani ekufanele ukubukeka ngayo ofuna ukufuna umsebenzi.
Izimoto zetekisi (Dubai)
Faka isicelo lapha: http://www.carstaxi.ae/en/public/page/contact
Le nkampani ayisebenzi eDubai kuphela. Yisebenziseni kakhulu isiko lama-Arabhu futhi njalo ngizama ukuqhubeka nayo yonke imithetho esebenza e-United Arab Emirates. Ukujoyina inhlangano efana nalokho kuzokunikeza ithuba lokufinyelela inketho engaphezulu ngempilo yakho namaphupho ama-Arabhu.
Faka isicelo lapha: https://www.shjtaxi.ae/careers
Inkampani eyi-100% iSharjah eyenze ngamatekisi. Kodwa-ke, le nkampani iyasebenza futhi eDubai nase-Abu Dhabi. Sharjah inkampani yamatekisi idinga abashayeli bamatekisi eDubai nase-Abu Dhabi. Kepha, ilayisense lokushayela le-UAE kumele. Ngakolunye uhlangothi, umnikazi welayisense we-GCC Light ovumelekile angafaka isicelo. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uzoba nakho lokho ezandleni zakho.
Le nkampani ikhokha kahle ngokwanele, ungathola i-AED. I-3,000 / - ukuya ku-AED.10,000 / - ngenyanga usebenza ngaphezulu kwe-8h ngosuku. Futhi ngokuvamile, izinkampani ezinjengalezi ungazithola unazo. Sicela ubheke inguqulo yabo yewebhusayithi yesiNgisi futhi sebenzisa kuphela uma unentshisekelo yokusebenza njengomshayeli weTekisi.
Faka isicelo lapha: http://thedriver.ae/contact-us.html
Inkampani Yomshayeli ine iminyaka yesipiliyoni kulo lonke i-United Arab Emirates ukuthutha. Le nkampani ihlinzeka ngomsebenzi omuhle kakhulu futhi oyingqayizivele we-chauffeur emphakathini we-UAE. Ngakho-ke, ngokususelwa encazelweni kufanele ufake isicelo somsebenzi nabo.
Inkampani ifana kakhulu nenkampani uber eDubai. ngokwesibonelo, ungashayela inkampani yokushayela. Futhi ngokujwayelekile, bazokuthumela indawo lapho uya khona. Babhaliswe neDubai's Roads and Transport Authority (RTA). Ngakho-ke, i-100% ilula futhi longa inkampani lapho ungathola khona imisebenzi ekhokhelwa kahle.
Faka isicelo lapha: http://www.tawasul.ae/
I-Tawasul Taxi yinkampani ikakhulukazi yabasebenzi abakhuluma isi-Arabhu. Noma kunjalo, ungathola okunikezwayo kwemisebenzi okuthokozisayo. Le nkampani ihlinzeka ngezinketho ezijwayelekile futhi udinga ukuba nelayisense. Ungakhuluma nabo ngokukunikeza imoto entsha. Kepha ngalelo cala, uzokwenza imali encane kakhulu ongayilindela. Noma kunjalo, ngemoto yakho, kuyinkampani enhle ukusebenza.
Indigo Qasha Imoto (Dubai)
Faka isicelo lapha: http://indigorentacar.com/contact
Inkampani enhle yokuqalisa umshayeli ochwepheshe imisebenzi e-Dubai. I-Indigo Rent A Car iyachuma ngokusetshenzelwa kwamakhasimende ngendlela ehlukile. Lokho iqiniso. Ama-Indigo aqasha amanani enkampani yemoto alula, enza amakhasimende akho ajabule futhi agcine abasebenzi bethu bejabule. Ngakho-ke, kubonakala sengathi a inkampani enhle kakhulu e-United Arab Emirates.
Konke okwenziwa yinkampani ye-Indigo kwenzelwa ukujikeleza nokushayela namakhasimende. Futhi ngokweqiniso lezi zinhloso indlela efanelekile yokwenza ibhizinisi. Ngaphandle kwalokho i-Indigo iqashe inkampani yezimoto e-UAE igxile ekuthuthukisweni okuqhubekayo kwemakethe yokushayela amatekisi eDubai.
I-555 Luxury Transport LLC (Dubai)
Faka isicelo lapha: http://city555luxury.com/about-us/
ICity 555 I-Luxury Transport LLC Ukuthola enye yamawebhusayithi ahamba phambili. Le nhlangano isebenza ku2007. Futhi uma sikhuluma, imisebenzi eyinhloko ukunethezeka kwemoto travel nezinsizakalo eDubai nase-Abu Dhabi. Abantu ba-oda izinsizakalo zabo ikakhulukazi ukusuka ehhotela lezivakashi. Ngaphezu kwalokho, izitolo ezinkulu kanye nezindawo zokudlela zithatha kulo lonke i-UAE.
Inkampani futhi isebenza ngokubambisana nezinhlangano ezinkulu eziningi e-UAE. Ngakho-ke, ukuthola umsebenzi kuzojabulisa futhi kube inzuzo enkulu yanoma imaphi amazwe aphuma emazweni aphesheya noma kwizakhamizi zasendaweni ezivela e-Emirates.
Umshayeli wexhumano (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://www.limo-uae.com/contactus.htm
I-Limousine, Izimoto zezemidlalo kanye nezimoto ezibizayo ezimangazayo. Lokhu konke kungokwabaphengululi inkampani e Dubai. Abaqhubi bezinkampani kumele babe ngabashayeli abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe. Le nkampani iyaziqhenya ngokunikeza insizakalo enhle kakhulu yamakhasimende ayo. Ngakho-ke, kufanelekile ngempela ukubanikeza ucingo noma vele ubathumele i-imeyili ngesicelo somsebenzi.
Le nkampani enikeza izinsiza eziningi. Ukuthi amakhasimende abo ayadinga yini ukuthuthwa eDubai Airport. Noma a umhlangano webhizinisi kwelinye lamahhotela e-Abu Dhabi. Ngaphezu kwalokho, umhlangano webhizinisi noma indawo yokudlela enamagama, le nkampani ikusiza ukuba uphumule ngaphakathi kwe-limousine yabo futhi izoshayela nawe ngendlela ephephile.
Limousine yangasese (Dubai)
Faka isicelo lapha: http://www.prvtlimousine.com/contact.html
Enye inkampani esohlwini lwethu yinkampani yangasese i-Independent Limousine eDubai. I-Independent Limousine UAE inhlangano isebenza ngombono weDubai. Izinsizakalo ezinkulu zithuthukisiwe eminyakeni edlule. Ngakho-ke, ukukhuluma okujwayelekile, ukusebenza nezinkampani ze-VIP yimisebenzi esezingeni eliphezulu.
Ngenkathi sisebenza nezinkampani zangasese zakwa-limousine. Iningi labashayeli lizohlinzeka ngamasevisi ahlanzekile okukhethekile e-Dubai nase-Abu Dhabi. Le nkampani inikeza i-VIP kumaklayenti ayo iminyaka engaphezu kweyishumi manje.
I-Royal Smart Limousine (Dubai)
Faka isicelo lapha: http://royalsmartlimousine.com/contact.php
Inkampani ineBMW Series 7 neLexus Es350. Inkampani emangalisa ngokweqile emakethe yokuhamba kanokusho. Inkampani yaseRoyal Smart Limousine iyinhlangano ukukhetha okuhle ukusebenza endaweni yokuhamba kanokusho.
Le nkampani emangalisayo ilungu leRashid Al Jabri Group of Companies esifundeni seGulf. Le nkampani yasungulwa ku-2002 ngu-Rashid Al Jabri. Futhi kusukela ngaleso sikhathi baqasha inani elihle labasebenzi.
Inkampani enhle yokukhulisa ikhono lakho lomsebenzi kanye nesipiliyoni sakho emakethe yokuhamba kanokusho. Le nhlangano ithembeke kakhulu, ilondoloze ukusebenza. Futhi kalula etholakalayo ukuqasha izisebenzi eziningi zokuhamba. Vele, izinkampani zisakhula ngokushesha okusheshayo. Futhi isebenzisa imiphakathi yasendaweni neyaphesheya kwezilwandle.
I-Wadi Swat Isithuthi (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://www.swattransport.ae/
Inkampani enhle lapho ungathola khona umsebenzi. Ikhamphani yezokuthutha kwe-Wadi Swat akuyona nje imoto eqasha ibhizinisi. Baqondisa ukuthola abagibeli futhi bahambe nabo emabhasi amancane.
Ukuthuthwa kweWadi kungenye yamabhizinisi aholayo okuqashwa kwamabhasi eDubai nase-Abu Dhabi. Ungakwazi sebenzisana nale nhlangano bese ushayela ibhasi noma ama-minivans. Kepha lokhu kuqashwa kwenkampani kuyanda e-UAE. Ngakho-ke, uma ufuna izinkampani eziqasha amabhasi eSharjah, Dubai nase-Abu Dhabi, ungafaka isicelo somsebenzi nale nkampani.
Limo Rental Car (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://www.limoinuae.com/contact
Inkampani yokuqasha izimoto i-Limo ​​nezinsizakalo eziphezulu. Le nkampani iqasha abokufika eDubai. Uzoba ne-Lexus-Toyota nokunye okuningi !. Le nkampani iyinhlangano ethanda kakhulu ukuthi ubanikeze ucingo. Indlela engcono kakhulu ngokumane ubabuze ngezikhala zomsebenzi futhi uzithole ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka.
I-Orange Auto (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://orangeauto.ae/contact-us/
-Google amamephu athanda inkampani ye-orange auto. Ungazihlola ukubuyekezwa mayelana ne-orange auto ku-google yami iphrofayela yebhizinisi. Inkampani evame ukukhuluma ihamba kahle kakhulu e-UAE. Izinkampani zokuhamba ezifana nalezi zincintisana kahle no-Uber e-United Arab Emirates. Akulona ibhizinisi elijwayelekile lokuqashwa kwezimoto kodwa ngisafanele ukufaka isicelo somsebenzi.
Ungakhohlwa ngo-Uber Kudla (Dubai)
Faka isicelo lapha: https://uber.com/drive/delivery/
Uber uyidla njengengxenye ehlukile ye Imisebenzi Ye-Uber Driver eDubai. Ungasebenzela amaketanga wezindawo zokudlela ngokwesibonelo Mc.Donald's noma i-Pizza Hut futhi ulethe ukudla kubantu abalambile ngenkathi uzothola imali enhle.
Ukuze uthole lolu hlobo lomsebenzi akudingeki ube nelayisensi yokushayela !. Ngoba ungakwenza lokho ngesithuthuthu esincane noma ngisho nasebhayisikili futhi uzothola ngokufanele emva kwezinyanga ezimbalwa zomsebenzi lapho !. Ngakho, enye indlela ehlakaniphile yokuba umshayeli we-Uber e-Dubai.
I-Ola Car Rental (International)
Faka isicelo lapha: https://www.olacabs.com/careers
I-Ola isicelo sohlelo lokuqasha izimoto futhi manje ibhizinisi elikhulu. Inkampani ikholelwa ukuthi ukuqalwa kwemakethe yezokuvakasha kubaluleke kakhulu. Isisebenzi esiqasha izimoto i-Ola sibonisa imigomo namanani akhe amakhulu ka-Ola. Ikakhulu le nkampani ukuphatha amabhizinisi amahle e-UK naseNdiya. Ukuqashwa kwezimoto i-Ola kukhuthaza bonke abasebenzi bayo ukuthi bazijwayeze nebhizinisi lokuhamba.
Njengenye yezinkampani ezinkulu kakhulu zokwabelana ngamahhashi embonini yezohambo yangasese. Ukuqashwa kwezimoto i-Ola kuyaziqhenya ngokuba ngebhizinisi, ukuhlolwa kanye ibhizinisi elisha emhlabeni jikelele!.
Faka isicelo lapha: https://www.gocatch.com/
Inkampani yakwaGoCatch iyinkonzo yokushayela amatekisi yase-Australia. Ngale nkampani, izindlela ezimbalwa ongashayela ngazo imoto yakho. Isibonelo umshayeli wezomnotho kanjalo nomshayeli wetekisi noma umshayeli we-premium. Noma kunjalo, le nkampani futhi enikeza ukubambisana okuhle. Uma unemikhumbi yakho ungabaqasha abasebenzi kanye nezimoto zakho.
Iwebhusayithi yenkampani yakwaGoCatch ifaka izimoto ezinkulu kakhulu zabashayeli bamatekisi ababhalisiwe namatekisi anamamitha e-Australia. The inkampani ikufanele ngempela ukuthola umsebenzi. Ngakho-ke, uma ufuna uhlobo lwemisebenzi e-Uber Kwangaphakathi. Kufanele nakanjani ufake isicelo kuwebhusayithi yaGo Catch e-Australia.
Amashayeli aphephile (International)
Faka isicelo lapha: https://www.kapten.com/
Inkampani yeKapten isebenza kuze kube manje emazweni ambalwa. Isibonelo, ungabathola eFrance Paris, eLyon naseCannes. Ngaphezu kwalokho, iSunshine Portugal eLisbon naseSwitzerland eGeneva. Lokhu inkampani isebenza emakethe yokuncintisana kakhulu.
Abashayeli babo baqeqeshiwe ngokomsebenzi futhi baqondiswe. Ukuhlinzeka ngezinsizakalo zamakhasimende ezihamba phambili zabaphathi abangochwepheshe. Ngenkathi ngisebenza nale nkampani insizakalo yamakhasimende ibe iphuzu eliyinhloko lemisebenzi yakho.
Insizakalo yamakhasimende yendawo yendawo, esebenzayo futhi eminingi.
Thola i-Taxi (International)
Faka isicelo lapha: https://gett.com
I-Gett Taxi yinkampani ekhulayo futhi imakethe enkulu kubo yi-Israel, Russia, United Kingdom neNew York. Kodwa-ke, le nkampani ayikhawulwanga kulezi zindawo, ngoba bafuna ukukhula ngokuzayo. Ngakho-ke, kufanele nakanjani phatha ukufaka isicelo kusigaba sewebhusayithi yabo yomsebenzi futhi babheka ukuthi bavuselele noma yikuphi ukwenziwa kwasendaweni okusha, isibonelo, i-Dubai noma i-Abu Dhabi.
Faka isicelo lapha: https://cabify.com/en/drivers
Shayela nge-Cabify. Inkampani ethandwa kakhulu emhlabeni jikelele !.
Le nkampani ingukukhetha kokuqala kwemali, inombolo yokuqala yokuphepha. Futhi kakhulu inkampani ethandwayo eqasha abokufika. Ungasiza ukugibela nabantu ukuya esikhumulweni sezindiza noma umhlangano womsebenzi futhi wenze imali eceleni.
Ukwenza imali kuleli bhizinisi kukhulunywa ngokujwayelekile kusiza abantu ukuthi basebenze noma babuyele ekhaya. Ibhizinisi leCabise ngelabasebenzi, amaklayenti noma abazongenela ukhetho. Noma ngubani uyakwazi ukufaka isicelo nokwenza imali.
Ukusebenza kubasebenzi beCabify bazi kahle ukuthi amabhizinisi ahamba ngezizathu eziningi ezahlukahlukene futhi enza inkampani kulelo banga it uzohlomula wena.
Faka isicelo lapha: https://www.ingogo.com.au/driver
U-Ingogo uyakwazi ukuphatha ama-terminals okucubungula amakhadi akho okusiza ukuqoqa nokubhuka okukhethekile kuze kufike kumahora we-48 ngaphambili ukuze uhlele usuku lwakho endaweni. Ungaba nemiyalo yokuphinda evela kubaphathi bebhizinisi kanye nakwamakhasimende ezinkampani abakhokhe imali eningi.
Le nkampani ivela e-Australia futhi iningi lesikhungo socingo nabantu abangokoqobo ukuze basize bakhona kuwe. Ngakho-ke, kufanele ucabangele inkampani yakwa-Ingogo bese uqala
ukusekela izindawo eSydney, eMelbourne, e-Adelaide, eBrisbane nasePerth. Sinethemba lokuthi uzothanda izinsizakalo zabo.
Faka isicelo lapha: https://www.itaxi.pl
Le nkampani iyinkampani ethandwa kakhulu ngabashayeli. Ungathola inkampani enhle ngaphakathi Poland njengamanje umnotho uyakhula. iTaxi imahhala futhi kulula ukuyisebenzisa uhlelo lweselula ePoland. Futhi le nkampani kukuvumela ukuba ubasebenzele ePoland. Kodwa-ke, kufanele ukhulume ulimi lwesiNgisi.
Inkampani iTaxi yikhiqiza ethandwa kakhulu ePoland futhi isebenza kuyo yonke imizi emikhulu yamaPolish inikeza iKakow neWarsaw lapho iningi labantu lijwayele abantu bezinye izizwe nabaseNgilandi.
Le nkampani iyona kuphela inkampani ezokunikeza ukunakekelwa kokusebenzisa futhi uzokwenza imali ngale ndlela. I-iTaxi ixhuma abasebenzisi kuphela nabashayeli abathembekile nabaqinisekisiwe emakethe yezokuhamba yepholishi. Ngakho-ke ungahlala uzolile futhi wenze into yakho ngenkathi ufinyelela lapho uya khona. Ukwenza imali ePoland bese uthumela lokho kuwe umndeni phesheya.
Shayela nge-Lyft (International)
Faka isicelo lapha: https://www.lyft.com/driver
ILyft yinkampani yaseMelika futhi ithandwa kakhulu e-United States futhi Canada. Kodwa-ke, akunamkhawulo ukuthi le nkampani ngeke yathuthela eMiddle East.
ILyft inesistimu enhle kakhulu yabashayeli bayo futhi nakanjani, iluhle inhlangano ukusebenza lapho bathuthela Dubai City. Kuze kube manje sazi ukuthi inkampani ye-lyft ibheke ukuya e-UAE kodwa inkampani ayikaqinisekisi usuku oluqondile.
Inkululeko yokukhululeka kukho konke kukho okwenzayo, ukuvumela umsebenzi wakho ube muhle futhi ube ntofontofo. Ukwenza imibono ehlukanisa umhlaba bese uqala ukwenza okusha kanye nokwenza imali okuqhubekayo e-US naseCanada kukwenza umuntu omuhle onesiqiniseko.
I-LeCab Taxi (International)
Faka isicelo lapha: https://en.lecab.fr/our-services/order-cab-in-paris.html
I-Lecab Taxi yinkampani yaseFrance efana ne-Uber e Dubai. I-LeCab inkampani iyona ehamba phambili insizakalo yokushayela yangasese yaseParis kuphela kubantu abangaphila empeleni eParis kuphela. Ngakho-ke, i-LeCab yakha isevisi wonke umuntu waseParis afuna ukuyisebenzisa: ekhululekile, ethembekile futhi engabizi.
Le nkampani yasungulwa e2012 futhi kusukela lapho inkampani yadalwa ngemibono embalwa elula yokusiza abantu basebenzise izinsizakalo ezinjengamatekisi nobber. I-LeCab inikeza iParis enye indlela yamatekisi nezimoto zomuntu. Futhi ukukhula njalo futhi nangesiNgisi.
Faka isicelo lapha: http://www.bitaksi.com/en/
Kulula kakhulu ukuyigibela, i-Bi Taksi iyinkampani ye ukuthuthukiswa esizayo. Le nkampani iyinsiza yamatekisi ehamba phambili e-Istanbul nase-Ankara ku igalikuni. Akunandaba ukuthi ukuphi ungafaka isicelo noma ufike eTurkey wenze imali ngeBiTaksi.
Ngenkampani enjengale, ekhuluma ngokuvamile, ungacela imininingwane eminingi futhi uyibuke ifike i-imeyili yangempela ngokunikezwa kwemisebenzi. Futhi amakhasimende akho ayakwazi ukukhokha ngekhadi lesikweletu noma ukheshi. Inkampani futhi ithatha amakhasimende akhubazekile ngakho, uzokwazi ukwenza imali eningi.
Faka isicelo lapha: http://talent.didiglobal.com/
UDidi usebenza emazweni amaningana, i-Australia, iBrazil, China kanye neJapan neMexico. Ngakho-ke, lokhu kufanelekile ukuthi inhlangano ibe nokubukeka. Bafuna abaphathi abanolwazi, iziqu zaseyunivesithi kanye nama-Interns.
Itekisi lakwaDidi liyinkampani yokuhamba enhle ukuze uthole imali. Kufanele ubheke izikhala zabo ngoba miningi imisebenzi enentshisekelo enikezwayo.
Thola i-Transfer.com (International)
Faka isicelo lapha: https://gettransfer.com/en/carrier/new
Le nkampani njengamanje ihambisa ihhovisi labo ukuqala ukusebenza eDubai nase-Abu Dhabi. Ngakho-ke, kufanele, kufanele ubukeke kuwebhusayithi yabo. Sinethemba lokuthi le nkampani izotholakala kungekudala eDubai, ngakho-ke gcina uhlelo lwakho lokusebenza luvuliwe nge Gettransfer.com.
Le nkampani izoba efana kakhulu njengokuba umshayeli we-Uber e-Dubai uzovele uqoqe umlayezo uphinde uthumele izimpahla noma umuntu ongokwenyama endaweni ekhethiwe.
Thola abasebenzi abadlulisayo baqonde ukubaluleka kokugxila kokukhishwayo, ukuzikhandla futhi abanentshisekelo ngebhizinisi lokuhamba langasese. Ngakho-ke, Get Transfer.com kukusiza nakanjani usebenzele ekufezeni umbono oyisisekelo kanye nokwakha ukuhamba kwabantu abayizigidi eziyinkulungwane.
I-Taxi elula (International)
Faka isicelo lapha: http://www.easytaxi.com/
I-Easy Taxi isetshenziswa kakhulu yinkampani yaseColombia, Argentina neMexico. Noma kunjalo, kufanelekile ukubheka amakhasi abo. Vele le nkampani ingavula ihhovisi ngaphakathi IDubai noma i-Abu Dhabi eminyakeni elandelayo bese uthuthela emakethe eMiddle East.
Bheka izinketho zabo, ubani owaziyo bangase babe neminye imisebenzi yabasebenzi abanolwazi emhlabeni wonke. Futhi ungahle uthande ukuqala ukusebenzela phesheya nge-Easy Taxi.
Thatha itekisi (International)
Faka isicelo lapha: https://grab.careers/
Inkampani enhle! Ukuthathwa kwenhlangano yokuqasha izimoto ingaphezulu kohlelo lokuhola ama-oda kuphela Southeast Asia. Inkampani le yibhizinisi lomhlaba wonke elinokutshalwa kwezimali okukhulu. Le nkampani isebenzisa uhlelo lwedatha yakamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili kakhulu ukuthuthukisa konke kusuka kwezokuhamba kuya ezinkokhweni nasezinhlwini zezinto eSoutheast Asia
Inkampani yokuqamba isebenza eduze nemiklamo kahulumeni kanye nezinhlelo. Kanye nabashayeli babo, abagibeli nabaziwayo bajabule. Konke kubonakala kunesimo esihle sokusebenza ngenjabulo kule nkampani.
Ukubamba itekisi kuhlose ukuvula amandla okungokoqobo esifundeni sase-Asia ngokusiza abantu ukuba babe Driver Uber Dubai (uhlobo) uhlobo lomsebenzi.
Baxazulula izinkinga ezilawula ukuqhubeka kweningi. Uma wabelana ngombono wenkampani yeDray Southeast Asia Forward, Faka isicelo sokujoyina iqembu labo namuhla.
Fakela inkampani (International)
Faka isicelo lapha: https://careers.taxify.eu/
I-taxify yinkampani yesibili ngemuva nje kwe-uber. Inkampani yamatekisi iyisincintisana esihle kakhulu sakwa-Uber. Ngokuvamile, abantu abaningi basebenzisa le nkampani emhlabeni wonke. Uma sithatha lo mhleli futhi sizoqhathanisa lokho nenkampani yakwa-Uber. Nakanjani uzothola inhlangano ekhula kahle kakhulu lapho ungathola khona nomsebenzi e-United Arab Emirates. E-Moment leNkampani ithola ukwenziwa kwasekhaya okungaphezulu kwezandla ezimbili.
Omunye umqondo omuhle waleNkampani ukuthi isenzo sokungasebenzisi noma yiliphi iKhadi Lesikweletu Uma ungenazo ezinye izindlela zokukhokha ongakhuluma ngokujwayelekile, qhubeka uqhubeke nokushayela futhi ukhokhe leyo mali ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke uma siqhathanisa le nkampani nezinye izinkampani zamatekisi sizokusho lokhu impela indawo enhle ongaqala ukusebenza nayo.
Le nkampani isuselwe emazweni ase-European Union e-Estonia abanekhanda labo lapho. Kepha uma sibathatha basebenza emazweni e-India e-United States of America Canada nakwamanye amazwe amaningi e-European Union. Ngakho-ke uma ufuna imisebenzi phesheya le nkampani nakanjani indlela smart yokuthola umsebenzi.
Ngaphambi Kokuya? - Amaphuzu aderit e Dubai!
E-Dubai, amaphuzu adlalayo aphawula ilayisense yakho yokushayela eDairobi emacala awenziwe ngenkathi ushayela. Uma ucabanga ngokuba ngumshayeli we-Uber, kuzodingeka ucabangele indlela yokuhlola ukuthi ungaphi amaphuzu alahlekile onayo. Lokhu kungenziwa ngokuhlola amadokhumenti akho noma uxhumane noMigwaqo Wendlela Nezokuthutha okhishwa amalayisensi okushayela. Ukuba umshayeli we-Uber e-Dubabi kanye nenkampani yethu kulula kakhulu.
Ngakho-ke, uma ufuna a indawo enhle yomsebenzi. Ngoba ngisho nokuthola ithuba lokushayela. Kumele hlola ibhodi lomsebenzi wendawo. Futhi kusukela lapho uthole umsebenzi ophelele kubashayeli. Ngikufisela inhlanhla.
Ithemba uzothola imisebenzi yokushayela e Dubai
Kodwa-ke, manje sesiqasha i-Driver Job ku-UAE
Thola UJob e-Dubai nekampani yethu ngokumangazayo ungathola lowo msebenzi wokuphupha ngendlela esheshayo ngokulayisha i-resume enkampanini yethu.
Vele ulayishe kabusha ukuqala futhi uqale I-Driver entsha e-Dubai.